FAMPAHALALANA SY SARY MOMBA NY FIOMPIANA DOG COONHOUND TREEING WALKER - ALIKA
Fampahalalana sy sary momba ny fiompiana Dog Coonhound Treeing Walker
Roscoe the Treeing Walker Coonhound amin'ny faha-2 taonany— 'Roscoe tsy mivovo, mandohalika sy midradradradra izy.'
Lisitry ny Treeing Walker Coonhound Mix Dogs
Ny Treeing Walker Coonhound dia manana soroka mahery sy mahery. Lehibe ny sofina raha oharina amin'ny loha. Ny molotra ambony dia mihantona tsara eo ambanin'ny valanorano ambany. Ny lava-tongony dia lava, mahitsy ary mahia. Ny palitao malama dia tsara sy manjelanjelatra ary tonga amin'ny endrika tricolor sy bicolor. (Tricolor dia tian'ny mpiompy.) Na dia volon-koditra sy fotsy aza izy io, dia tsy tokony hatao hoe 'mena' velively, mba hanavahana azy amin'ny Redbone Coonhound.
Ny Treeing Coonhound dia tsara amin'ny ankizy ary miaraka amin'ny alika hafa. Ny fanofanana dia tanterahina amin'ny fahasahiranana kely, satria afaka mianatra avy amin'ny ohatra ireo alika ireo. Miasa sy mihaza alika aloha izy ireo, nefa koa ho lasa alika mpiara-miasa. Ny miasa, mankany amin'ny Treeing Walker Coonhound, dia tsy asa fa fanatanjahantena sy fialana. Miroborobo izy ireo amin'ny fijerena tsy tapaka sy ampy. Ny Treeing Walker dia avo lenta nefa tsy ampy fanatanjahan-tena ara-tsaina sy ara-batana . Tia sy dodona ny hampifaly, ny Treeing Walker dia manan-tsaina, mahay ary matoky tena. Ny sasany milaza fa izy ireo no karazany tsara indrindra amin'ny fitsapana eny an-tsaha coonhound noho ny hafainganam-pandehan'izy ireo, ny fahaizany mamantatra haingana sy fahaizan-kazo tsara. Haingam-pandeha izy ireo amin'ny fofona fofona tsara sy fidradradradrana miavaka. Mifanerasera amin'ny fahatanorana.
Hahavony: 20 - 27 santimetatra (51 - 69 cm)
Karazana salama somary salama.
Ny Treeing Walker Coonhound dia tsy atolotra ho an'ny fiainana an-trano. Ireny scenthounds ireny dia be fanahiana loatra ny handry mandritra ny trano na condo iray eny ambanivohitra. Izy ireo dia mety amin'ny toetr'andro mafana sy mafana.
Ity alika be fanahiana sy mavitrika ity dia nompiana ho an'ny fanatanjahan-tena mafy. Teraka mpihaza voajanahary ny Coonhounds, noho izany dia manana fironana handositra sy mihaza izy ireo raha tsy voatazona fefy tsara rehefa manao fanatanjahan-tena samirery. Tsy manana fahatsapana an-dàlana mihitsy izy ireo, ka tsy maintsy hitazona azy ireo amin'ny toerana azo antoka. Mila entina a isan'andro, mailaka, mandehandeha lava na mihazakazaka . Coonhounds izay tsy manana fanatanjahan-tena ampy ara-tsaina sy ara-batana dia mety ho lasa tady avo lenta ary manimba mihitsy aza.
Ny Treeing dia karazana fikarakarana mora. Ny fikosehana sy fikosehana tsindraindray ihany no ilaina. Zahao tsy tapaka ny sofina raha misy famantarana ny areti-mifindra ary aza hadino ny mitazona ny ao anaty ny sofina ho madio. Mandrosoa raha tsy ilaina. Ity karazana ity dia mpitrandraka antonony.
Ny Treeing Walker dia taranaky ny English Foxhound , izay nanafatra an'i Thomas Walker tany Virginia tamin'ny 1742. Fotoana vitsivitsy tamin'ny taona 1800, alika iray fantatra amin'ny anarana hoe 'Tennessee Lead', alika halatra tsy fantatra fiaviana, dia niampita tany amin'ny Walker Hound. Alika mahery izy, niavaka tamin'ny filalaovana lalao, nitondra fiara ary hafainganana ary nanana vava madio sy fohy. Ny Treeing Walker dia tsy nekena ho toy ny karazany manokana hatramin'ny 1946. Ity tsipika mivantana ity dia mitondra antsika ity mpihaza mahomby ity. Ity coonhound dia mitazona ny endrik'ilay razambeny, ny English Foxhound . Fahatakarana lalao miaraka amin'ny hafainganam-pandeha tsy manam-paharoa sy ny familiana lehilahy no mahatonga ity coonhound tsy azo sakanana. Ny tsipika coonhound dia tsy mijanona eo amin'ny Walker, satria ny mpihaza amerikana dia mampiasa karazany hafa koa. Ny coonhound iray toy izany dia fantatra amin'ny hoe Running Walker. The Treeing Walker Coonhound dia mpihaza mahomby sy azo antoka raccoons , sakamalao sy opossum. Ny 'Treeing Walker' dia 'haza' ny hazany, ary avy eo afaka mihanika ilay hazo indraindray hahatratra azy. Miaraka amina fiofanana kely kosa dia hiantsoantso tsy manam-paharoa izy amin'ny filazany amin'ny mpihaza fa voahidy ny haza.
Zavatra mpiandry ondry Mix Belza malinois
'This is Clary's HiSpeed ​​This Buds 4 U, fantatra am-pitiavana hoe `Bud` ao an-trano. Bud dia Walker Treeon Walker Coonhound. Voasoratra anarana UKC / AKC izy. Bud dia Tompondakan'i Conformation UKC, Tompondakan'ny Bench Show ary Tompondakan'ny Grand Show Champion AKC. Eto izy dia mampiseho ny fahaizany eo amin'ny rindrin'ny Lovers Leap. '
Clary's HiSpeed ​​This Buds 4 U, fantatry ny olona amin'ny anarana hoe `Bud,` hazo ny vatany
'Ity dia Hardwood Hi-Voltage, fantatra amin'ny anarana hoe `Pete` ao an-trano. Pete dia Walker Treeon Walker Coonhound. Voasoratra anarana UKC / PKC izy. Pete dia Tompondakan'ny UKC Nite Champion ary Grand Show Champion. '
Molly the Treeing Walker Coonhound amin'ny faha-4 taonany— 'Nahazo an'i Molly aho tamin'izy 1 taona tamin'ny alàlan'ny vondrona mpamonjy aina avy any San Francisco. Nanavotra azy tamin'ny toeram-pialofana biby izy ireo. Efa ho 8 taona izy izao ary alika lavorary. Fantatra manerana ny tanànantsika i Molly amin'ny diantsika lava isan'andro, izay ahalalàny fa fantatry ny rehetra fa tiany ho tototra sy ho voakenda izy. '
Molly the Treeing Walker Coonhound amin'ny 4 taona
Tugger the Treeing Walker Coonhound rehefa olon-dehibe
Ity dia Treeing Walker hazo manamboatra coon.
Tugger the Treeing Walker Coonhound mbola kely
I Asha no renin'i Tugger.
Chloe dia eo ankavia miaraka amin'ny endrika mainty kokoa, izy dia mifangaro Treeing Walker Coonhound (mety ho mpanondro na karazana spaniel). I Lucy, eo ankavanana, dia Treeing Walker Coonhound.
Chloe sy Lucy
Kensington dia tia mitaingina fiara, indrindra rehefa afaka manondrika ny lohany amin'ny tampon'ny volana izy!
Jack the Treeing Walker Coonhound amin'ny faha-4 taonany mitsako ny taolany eo am-pandriana alika— 'Noraisinay i Jack tamin'ny volana Mey tamin'ity taona ity avy amin'ny fiarahamonina humanash Nashville. Jack dia Walker Lehibe an'ny Walker Coonhound milanja 72 lbs eo ho eo. Fa mpandeha an-tongotra hatrany izy. Tiany ny mandray amin'ny hazo sy mankafy ny taolany lehibe. Izy dia mahafinaritra miaraka amin'ny zanako vavy 3 taona, izay nampianarina fa ny alika dia tsy tia zavatra mitovy amin'ny antsika. Manam-paharetana izy, tsara fanahy, tsy mivadika ary tsy tia afa-tsy ny andro fiasana (any an-tokotany na amin'ny kamio). Ny sofiny velvety sy hanitra alika alika no zavatra voalohany hitako ny maraina. Mpinamana be amin'ny sakafom-pianakavianay (Poppy) koa izy, ary fantany fa izy no miandraikitra (ambaniko) ary manome lanja ny toerany raha tsy te hilalao aminy izy. Tiany ny mihazakazaka eo amin'ny zaridainan'alika miaraka amin'ny coonhounds hafa. '
Jack the Treeing Walker Coonhound amin'ny faha-4 taonany naka hatory miaraka amin'ny saka
Jack the Treeing Walker Coonhound amin'ny faha-4 taonany naka hatory
Jack the Treeing Walker Coonhound amin'ny 4 taona
Hijery ohatra hafa momba ny Treeing Walker Coonhound
Treeing Walker Coonhound Sary 1
Treeing Walker Coonhound Sary 2
sisin-tany collie sy mix mix australianina
Espaniôla akoho anglisy dia miloko volamena
piebald dachshund mainty sy fotsy
inona ny alika chi poo